Aros Energy nezimemezelo ngaphansi umlilo ezindaweni eziningi | Holmbygden.se
Posted on 17 Okthoba, 2013 ngu Holmbygden.se
isitifiketi Aros Energy AB ngeke ezinsukwini eyaziwa kwezinye izingxenye Sweden.
Ngesonto eledlule Rental isivakashi Association Journal Ikhaya & Qasha ku Aros Energy nezimemezelo ngu Usihlalo Michael Sterner uyaqhubeka ukuthenga up uJohan Stendahls odlule ingcebo. Lesi sikhathi e Tobo ngaphandle Uppsala.
I-Home magazini & Qasha eminyakeni uye wayilandela izakhiwo mishandled e Tobo laqokwa uJohan Stendahl omunye kulendawo okubi kakhulu yaseSweden. Nokho, Stendahl, sebefake icala abalimi Association. Umgomo, iyiso ummeli kwesokudla Michael Sterner njengommeleli wakhe zomthetho,.
umdayisi Njengasosukwini Holm akanakho umthengi noma unolwazi abaqashile yabo Tobo mayelana kwenzekani. Yini isitifiketi Aros Energy AB liphinde igodlelwe, ngisho lapho bathole isinqumo umklomelo ukukhoseliswa yokuhlala Migration weBhodi.
Umdayisi othenga property self naphezu “ezingenanzuzo”
Umdayisi we izakhiwo ehilelekile Tobo kuyinto Fagerhyltan ne-CEO:n U-Marcus Hamberg. Ngamanye amazwi, nabanikazi abafanayo 2011 wathenga Senior zasekhaya Yathishela Ezezindlu Holm ngemva Stendahls ucabanga. kuye & iqashwe avslöjar Futhi ukuxhumana phakathi Fagerhyltan AB noJohan Stendahl. UMlungisi Hamberg ubeke ukuthi yokuthengisa ngenxa inzuzo abampofu. “Ngiyishiyile lapho. Angikwazi nje ufisa umnikazi omusha sikufisela inhlanhla”, uyaqhubeka.
Yini Marcus Hamberg angase acabange ngayo lapho ethi, “kwesokunxele lapho” futhi “babefisa ukuba lolu entsha umnikazi inhlanhla” wukuthi kuba empeleni yena ngokwakhe oba umnikazi omusha futhi. Njengoba esanda okungukuthi Fagerhyltan usanda kuba iningi umnikazi we Aros Energy isitifiketi AB. Ngakho, wadayisa inkampani ngokuyinhloko kuwo yena. Umehluko wukuthi kuba “Aros Energy isitifiketi AB” ekufakweni kwesicelo IsiSwidi Migration Board futhi futhi umlingani Michael Sterner (kokubili nokuxhumana ukuze uJohan Stendahl) amelwe inkampani entsha.
Funda kabanzi kusuka Ikhaya magazini & Qasha ka Aros Energy nezimemezelo e Tobo, Uppsala